Diyaarado ay Saaranyihin Lacago Cusub oo Soo Gaaray Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Diyaarado ay Saaranyihin Lacago Cusub oo Soo Gaaray Muqdisho
Labo Diyaaradood oo Lacago sida ayaa maanta waxaa ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho.
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay Horseed Media heshay ayaa waxaa ay sheegaayan in diyaaradahaas ay saaranyihin lacago cusub lasoo daabacay ayadoo aan la aqoon halka ay ka yimaadeen oo ay lacagahaas kasoo qaadeen.
Wasiirka Lacagta Dowladda Federaalka ee Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisoow oo ay Horseed Media la xirrirtay isla markaana arintaas wax ka weydiisay ayaa sheegay in uusan wax ka ogeyn uuna ka warqabin in ay yimaadeen magaalada Muqdisho diyaarado lacago cusub wada.
Xildhibaan Caasho Axmed Cabdalla oo ka tirsan guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayaa iyaduna Horseed Media u sheegtay in lacagahaas ay yihin kuwa sharci darro ah iyadoo Bulshada Soomaaliyeed uga digtay in ay isticmaalaan oo ay adeegsadaan.
Dowladda Federaalka ayaa hore waday qorsheyaal oo ay ku doonaysay in ay lacago cusub kusoo daabacdo ayadoo ay heshiis arimahaasi ku aadan la gashay Dowladda Suudaan.
Talaabadaas ayaa waxaa ku gacan seyray ganacsatada Soomaaliyeed iyo Dowladda Puntland oo ay ku tilmaameen mid aan iminka surtagal noqon karin.